के तपाइँ वेब डेटा स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ? सिल्टलले नि: शुल्क वेब डेटा एक्सटेक्शन सफ्टवेयर परिचय दिन्छ
वेबसाइटबाट जानकारी प्राप्त गर्दै विभिन्न कम्पनीहरू द्वारा नियोजित एक जटिल प्रविधि हो।. केही विषयहरु मा डेटा को मात्रा को संग्रह गर्न चाहते संगठनहरु निम्नलिखित कार्यक्रमहरु लाई लाभ ले सकते हो:
स्क्रैपर एक क्रोम एक्सटेन्सन हो जुन यसको एक विस्तृत श्रृंखला हो. यो केवल डाटा स्क्रैपर तर एक खोजशब्द शोधकर्ता होइन. यो अति नै परिष्कृत उपकरण होइन जुन Google स्प्रिडसिटमा तपाईंको डाटा निर्यात गर्न सक्दछ. तपाईंको डाटा प्रतिलिपि गरिनेछ र यसको स्प्रिेडसिटमा भण्डारण गरिनेछ, OAuth को लागि यो सम्भव बनाउनका लागि धन्यबाद. स्क्रैपर प्रोग्रामर र गैर-प्रोग्रामर दुवैको लागि राम्रो छ.
2. वेब फसल
वेब हार्वेस्ट विभिन्न कन्फिगरेसन विकल्पहरूको साथ आउँछ र एक खुल्ला स्रोत स्रोत निकासी कार्यक्रम हो. यो जाभामा लेखिएको छ र दुवै आधारभूत र उन्नत वेबसाइटहरु बाट डेटा एकत्र गर्दछ. वेब फसल मुख्यतः XML वा एचटीएमएल-आधारित वेब पृष्ठहरूमा लक्षित गर्छ.
स्क्रैप अझै अर्को अद्भुत छ डेटा स्क्रैपिंग उपकरण . यो दर्जनौं सुविधाहरू र विकल्पहरूसँग पूर्ण पूर्ण क्रिल्डिङ ढाँचा हो. Scrappy चाँडै सञ्चालन गर्दछ र तपाईंलाई डेटा को वांछित ढाँचा प्राप्त गर्दछ. यो मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तपाइँ आफ्नो उपकरणमा पाइजोन स्थापना गर्नुभयो. साथै, तपाइँसँग यो प्रोग्रामिङ भाषाको आधारभूत बुझाइ हुनु आवश्यक छ.
FMiner सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा उपयोगी डेटा निष्कर्षण उपकरण हो. अन्य समान कार्यक्रमहरूको तुलनामा, FMiner अधिक विश्वसनीय छ र राम्रो सुविधाहरू छन्. यसले सबै जटिल वेबसाइटहरू बाट डेटा निकाल्छ र जाभास्क्रिप्ट र AJAX ढाँचाहरू समर्थन गर्दछ. तपाइँले तपाइँका आवश्यकताहरूमा आधारित, MySQL र Oracle ढाँचामा डेटा पनि प्राप्त गर्दछ.
OutWit सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा उपयोगी डेटा निष्कर्षण कार्यक्रम हो. यो डेटा निष्कर्षण गुणहरूको भार संग फायरफक्स एक्सटेन्सन हो. आउटराइटले तपाईंको वेब खोजलाई सरल बनाउँछ र स्वतः वेब पेजहरू मार्फत ब्राउज गर्न मद्दत गर्दछ.
6. डेटा उपकरणपट्टी
डेटा उपकरणपट्टी तपाईंको सजिलै संग डेटा स्क्रैपिंग प्रक्रिया स्वचालित गर्न सक्छ. यदि तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा संकलन गर्न खोज्नु भएको छ र-बिन्दु जानकारीको आवश्यकता पर्दछ, तपाइँले डेटा टुलबार कोसिस गर्नुपर्छ.
iMacros को सबै भन्दा राम्रो विशेषता हो कि यो दोहोरो कार्य स्वचालित गर्न सक्छ. चाहे तपाइँ यसलाई फायरफक्स वा गुगल क्रोममा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, iMacros सबै ब्राउजरलाई समर्थन गर्दछ र तपाईले ठूलो संख्यामा वेब पेजहरू मार्फत नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ।. साथै, यसले वेब तालिकाहरू र सूचिहरूलाई प्रयोगयोग्य जानकारीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ.
9. Google वेब स्क्रैपर
यो ब्राउजर आधारित डेटा निष्कर्षण प्रोग्राम हो जुन आउटराइट र आयात जस्ता काम गर्दछ. io. गुगल वेब स्क्रैपर पाठ र पीडीएफ फाईलहरू दुवै डेटा निकाल्न डिजाइन गरिएको छ. तपाइँलाई चाहिएको डाटालाई हाइलाइट गर्नु पर्छ र यो उपकरणले तपाईंलाई एक घण्टामा इच्छित प्रतिलिपिहरू दिनेछ. तपाईं आफ्नो डेटा Google Drive मा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ.
निकासी एक अपेक्षाकृत नयाँ अझै सम्म अचम्मलाग्दो स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो जुन मिसिन शिक्षा प्रविधिको द्वारा संचालित छ. तपाइँ यस कार्यक्रमको साथ एपिआईहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण वेबसाइटमा सेकेण्ड भित्र क्रल गर्न सक्नुहुन्छ Source .